श्री’मान श्री’मती तथा प्रे’मी प्रे’मिकाको उमेरको अन्तर कति हुनुपर्छ ? एकपटक हेर्नुहोस – – Life Nepali
श्री’मान श्री’मती तथा प्रे’मी प्रे’मिकाको उमेरको अन्तर कति हुनुपर्छ ? एकपटक हेर्नुहोस –
नेपाली समाजमा श्रीमान् भन्दा श्रीमतीको उमेर कम हुनुपर्छ भन्ने धारणा राख्ने गरेको पाइन्छ । युवतीहरु पनि आफुभन्दा बढी उमेरका पुरुषसँग दाम्पत्य जीवन विताउने अभिलाषा प्रकट गर्छन् ।उनीहरु प्रेम गर्दा होस् वा विवाह गर्दा, आफुभन्दा बढी उमेरका पुरुषसँग गर्न चाहन्छन् । सोहि अनुसार बिवाह गरिरहेका पनि छन् । खास गरेर युवतीहरु पुरुषबाट सुरक्षा खोज्छन् । उनीहरु आफ्नो जीवनसाथी आफूभन्दा परिपक्क होस् भन्ने चाहन्छन् । त्यसैले उनीहरु आफुभन्दा बढी उमेरका पुरुषसँग सम्बन्ध गाँस्न रुचाउँछन् ।सायदै होलान्, श्रीमान् र श्रीमतीको उमेर बराबर भएको धेरै जसो श्रीमतीको भन्दा श्रीमानकै उमेर बढी हुन्छ । तर, कति बढी ? यसको पनि कुनै सीमा छैन । कोही श्रीमान्-श्रीमती १ बर्षका जेठो-कान्छो हुनसक्छन् । कतिमा भने १० वा ११ बर्षको उमेर अन्तर हुनेगर्छ । *** पूरा भिडियो हेर्न तलको लिङ्कमा क्लिक गर्नुहोला ***
यस किसिमको उमेर अन्तरले दाम्पत्य सुखमा केही असर गर्छ ?किन भने विवाह एक यस्तो सम्ब’न्ध हो, जसमा श्रीमा’न् र श्रीमती बीच खास तालमेल हुन जरुरी छ नभए त प्रेमले जोडि एको यो सम्बन्धमा खट पट आउन सक्छ र अन्ततः डि’भोर्स सम्म पुग्न सक्छ ।जर्जिया एटलान्टाको एमोरी युनिभर्सिटीको अध्ययनकर्ताले यसै सम्ब’न्धमा एक अध्य’यन गरेको थियो ।त्यसमा तीन हजार दम्पतीले भाग लि’एका थिए । उक्त अध्यय’नको ध्येय थियो कि, के कारण दाम्पत्य जीवन लामो समय सम्म सुमधुर रहन्छ ।
अध्ययनका क्रम माउमेर,जाति,पढाई,रोजगार,धर्म,आय,परि वारमा सदस्य संख्याको जानकारी लिइयो ।यस किसिमको डाटाबाट अध्ययनलाई भरपर्दो बनाउनका लागि रि’लेशनसिप र प्रेमको दृष्टिबाट निष्कर्ष निकाल्न सहज भयो यो अध्ययन केवल यही कुरा पत्ता लगाउनका लागि गरिएको थियो कि के वास्तवमा सफल र लामो स’म्बन्धका लागि पा’र्टनरबीचको उमेर अन्तरले कुनै अर्थ राख्छ ?
त्यसैगरी जुन दम्पतीको उमेर अन्तर १२ बर्षभन्दा बढी छ, उनीहरुको स’म्बन्ध वि’च्छेद हुने संभावना अधिक रहन्छ । यसको निष्कर्ष के भने, दम्पतीबीच जति धेरै उमेर अन्तर हुन्छ उत्तिनै उनीहरुको स’म्बन्धमा ख’टपट आउने र स’म्बन्ध वि’च्छेद हुने संभावना बढी देखियो । तसर्थ सुखमय दाम्पत्य जीवनका लागि श्रीमान् र श्रीमतीको उमेर अन्तर पनि कम हुनुपर्छ भन्ने निष्कर्स निकाल्न सकिन्छ । एजेन्सी
Previous कतारबाट बाहिरियो नेपाली यु’वतिको अ’श्लिल भिडियो !
Next एकसाथ दुई गर्लफ्रेन्डसंग बिवाह गरेपछि”